TCDD ichazotora mubetseri wetsiva - RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraTCDD Mubatsiri Kutenga Kunzvera
07 / 01 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Mabasa, Railway, GENERAL, masangano, musoro wenyaya, TURKEY, TCDD
tcdd mubatsiri wekuongorora achaita kutenga
TCDD ichahaya Assistant Inspector; 4 Mutevedzeri Wongorori Vanozonyorwa kuti vapihwe kuKuongorora kweTCDD General Directorate.
Muongorori wokupinda unotsanangurwa pasi apa.
Exam Zuva neNguva: Bvunzo dzakanyorwa dzichaitwa musi wa 15 Kukadzi 2020 (Mugovera) pakati pa09.30-15.30.
Nzvimbo yekuongorora: TCDD General Directorate Hacı Bayram Quarter, Hipodrom Street, Kwete: 3, 06050 Altındağ-Ankara Cafeteria Hall.
1) Kuve nemabvumirano anotsanangurwa muChinyorwa 48 cheiyo Civil Serviceants Law,
2) Kwete kuti asvike makore makumi matatu neshanu (01.01.2020) kubva pa35,
3) Kuve ndakapedza imwe yehunyanzvi hweMutemo, Zvematongerwo enyika, Economics, Bhizinesi Kurovera, Economics uye Administrative Sayenzi uye imwe yemasangano edzidzo muTurkey kana kune dzimwe nyika, iyo dzidzo inogamuchirwa nevane simba vanokwanisa kweanosvika makore mana,
4) Boka A reParuzhinji Vashandi Sarudzo yekubvunzurudza yakaitwa neUSYM muna 2018 na2019 vari pakati pevadzidzi vekutanga makumi masere vakawana makumi manomwe kana kupfuura zvikamu kubva muchikamu cheKPSSP48 (Kana huwandu hwevanyori hwakanyatso zadzisa zvinodiwa bvunzo hunopfuura makumi masere, kutanga nepamusoro-soro chikoro) Vagumi vekutanga vachasvitswa vanozogamuchirwa kunopinda bvunzo dzekupinda, uye vese vanyoreri vanowana mapoinzi akaenzana nemutungamiriri wechi70 vachakokwa pabvunzo),
5) Pasina chero chipingamupinyi kuInternational maererano nekunyoreswa uye chimiro pakupera kwekuferefetwa kunoitwa (Iyi mamiriro ndeye chete kune avo vanenge vapasa bvunzo dzakanyorwa uye inotemerwa neKwayedza Bvunzurudzo pamberi pekuongororwa nemuromo).
6) Panyaya yehutano hwemagariro, kukwanisa kuenda kumatunhu ese enyika kuti ushone kushanda, kudzivirira basa rinoenderera remuviri kana chirwere chepfungwa kana hurema pamwe nevakaremara,
7) Kuve nemabvumirano anodiwa neIye Ongororo maererano nemamiriri,
8)Kutora bvunzo kekutanga kana kechipiri,
Bvunzo yekushandisa uye bvunzo yekupinda Gwaro
Mibvunzo yekunyora bvunzo inogona kuitwa uri wega kana kutumira tsamba kuTCDD General Directorate yeKuongorora Bhodhi Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Street, Kwete: 31.01.2020, 3 Altındağ-Ankara, kutanga kubva pazuva rinotevera kuburitswa kwechiyedzo chekuzivisa muGeneral Gazette kusvika kumagumo emaawa ekushanda neChishanu, 06050. zvikumbiro mushure menguva yekupedzisira hazvizotarisirwa. CD TCDD General Directorate Assistant Inspector Kupinda Yekunyorera Fomu Rokushandisa fomu kuti ritorerwe kubva kero zvataurwa pamusoro apa kana www.tcdd.gov.tr ​​By kero. Zvikumbiro zvisina kuitwa panguva uye nemagairo aripo uye ruzivo hazvizoitwe.
Vanyoreri vanokodzera kutora bvunzo vachapihwa mubairo wegumi TL. Mari dzichazoiswa kumaaccount eHalkbank Ankara Corporate Branch TR 10 kana Vakıfbank Labor Branch TR 710001200945200013000001. Hapana kudzoserwa kunozoitwa, uye mari yacho ichazonyorerwa kubhengi muchikamu chetsananguro yekugamuchira uye üne Inspectorate bvunzo ”kuvepo.
Rondedzero yekupedzisira yevanenge vakodzera kutora chikamu bvunzo ichave iripo 05.02.2020 kubva kuTCDD Yekuongorora Board. Mukuwedzera, www.tcdd.gov.tr ​​By Internet kero. “Bvunzo dzekupinda mugwaro rekuti bvunzo richapihwa naTCDD yekuongorora Board kubvira muna 10.02.2020 uye iyo bvunzo dzekupinda mugwaro risati ratorwa kusvika zuva rekunyorwa bvunzo. Muri kuongorora, gwaro iri rinofanira kuzotumirwa, uye gwaro rechokwadi nerechokwadi uye rine mvumo yakadai seChitupa Makadhi, Dhivhiri reDhivhari kana Passport, iyo ichashandiswa mukuzivikanwa, ichachengetwa.
Zvinyorwa Zvinodikanwa pakuongororwa
1) Mifananidzo yegwaro rezvitupa rine TC Chitupa Nhamba chirevo kana TC Nhamba Yekuzivisa,
2) Exam Application Fomu (rakawanikwa kubva www.tcdd.gov.tr ​​kana neruoko),
3) Kopi yekutanga yeKPSS Mhedzisiro Rugwaro iyo nguva yekubvumidzwa kwayo haina kupera kana kopi inobvumidzwa yecomputer kudhindwa,
4) Mavambo edhipuroma kana chetifiketi kana sampuli yakatenderwa nesangano,
5) Mafoto maviri (4,5 x 6 cm), uye TCDD anoshanda kune Bhodhi reVanoongorora.
Aya magwaro anotevera anodiwa kubva pabvunzo dzakanyorwa pasati pamunyorwa bvunzo.
1) Chirevo chakanyorwa chinoratidza kuti hapana chipinganidzo pakuenderera mberi kwemabasa ehutano,
2) Chirevo chakanyorwa chekuti vanhurume vevachakwikwidza havana hukama nevemauto.
3) Chirevo chakanyorwa chisina rekodhi retsotsi,
4) Mumiriri weCV,
5) Mapikicha mana (4,5 x 6 cm),
6) Pekutanga kana notarised fotokopi yakafanana seyetificha yevanopedza kudzidza mudzimba kana vekunze masangano edzidziso kunze kwePeoples of Law, Zvematongerwo enyika, Economics, Bhizinesi Kuteedzera, Ehupfumi uye Administrative Sayenzi.
TCDD Transportation Inc. Mubatsiri Wakaongorora Vanoparidza
Kuchengetwa kwemubatsiri muchengeti paTCDD